UKunene noBuchanan sebezogijima Osuthwini ngesizini ezayo
Wethule abadlali bakhe abasha uBenni McCarthy obesanda kuhleka iKaizer Chiefs ngokuwola kwasani esemakethe njengoba kuvulwe iwindi lokusayina abadlali nje. UMcCarthy uveze ukuthi AmaZulu azobe esehlome noKeagan Buchanan noMxolisi Kunene ngesizini ezayo.
Bobabili laba badlali bebegijim akwiMaritzburg United ngesizini edlule. UBuchanan wanqanyulelwa inkontileka ngasekuqaleni konyaka ngemuva kokungavumelani nabaphathi ngokuvuselelwa kwayo.
Kwavela ukuthi babefuna ukumehlisela imali ayiholayo, wabhoka wakhahlela. UKunene naye uphelelwe yinkontileka ngoJuni akangavuma ukuyivuselela njengoba ebeseshelwa wuSuthu.
“Abafana bethu abasha ababili bayajwayela oKeagan Buchana noKunene. UKunene useza kahle kwazise ubuya ekulimaleni akuthola esekwiMaritzburg kodwa kuza kahle. Kuningi nokuhle okubonakala kuBuchanan,” kusho uMcCarthy.
UKunene ubonakala ezovala isikhala esishiywe wukuhamba kukaZukile Kewuti obebolekwe kwiCape Town City ngesizini edlule. Okuxakile wukuthi kuthe uma esephelelwa yinkontileka kwiCity, akangabuyela kuMaZulu kodwa way kwiMaritzburg.
Wayelandwe uMcCarthy kwiCity ngoba ethi uyazi ukuthi uzomsebenzisa kanjani. Bekulindeleke asale esesayina ngokugcwele oSuthwini uma esephelelwe yinkontileka kwiCity.
“Abanye abadlali babukeka belinyusile izinga futhi ngijabule ngesingase sikwenze kule sizini ezayo. Kusakhona izindawo esisafuna ukuqinisa kuzo eqenjini,” kuqhuba lo mqeqeshi ozikhulumelayo.
Ubuye wabongela nabadlali bakhe ababili abebeseqenjini leBafana Bafana eliwine iCosafa Cup muva nje. UVeli Mothwa noSIyethemba Sithebe bebengokaputeni kuleli qembu ebeliqeqeshwa nguMorena Ramoreboli.
“Ngifisa ukubongela uVeli Mothwa noSiyethemba Sithebe ngokudlala kwabo kahle kwiCosafa Cup njengoba beqokwe baba ngunozinti nomdlali ovelele ngokwehlukana.
“Siyaziqhenya ngalezi zibabuli zaMaZulu, sisabanike ikhefu elincane bazobuye babuye eqenjini beno-Augustine Mulenga obeseqenjini lesizwe langakubo.” UMulenga ubekwiChipolopolo yaseZambia.
UMcCarthy ungomunye wabadlali bakudala beChiefs ne-Orlando Pirates abakhangisa ngeCarling Cup ezodlalwa yila maqembu ngo-Agasti 1.
FUNDA NALA: UMcCarthy uhlekise ngokusayina kweChiefs inqwaba yabadlali
Ekhuluma ngala maqembu phakathi nesonto, usole umqeqeshi wePirates, uJosef Zinnbauer ngokufunisela kuleli qembu lakhe. Uthe ukujikajika kwakhe indlela elidlala ngayo kuchaza ukuthi udideke uphelile.
IChiefs yona uyihlekele ukusayina inqwaba yabadlali wathi isikhipha isibhongo sokuthi ibingavumelekile ukusayina ngesizini edlule. IChiefs isisayine abadlali abayisikhombisa njengoba kuulwe iwindi nje.
UMcCarthy wayedlala kwiPirates ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi kanti uke wamataniswa nimsebenzi wokuqeqesha kuwo womabili lanmaqembu aseSoweto.
Previous Previous post: ISharks ibuyela enkundleni kwiCurrie Cup ngemuva kokuvinjwa yiCovid
Next Next post: INingizimu Afrika isethubeni lokunyusa ukuzethemba kweyeT20